MTV nyeredzi Rob Dyrdek nemukadzi Bryiana vanogamuchira mwana musikana! - Nhau
Kuru Nhau Style Macelebs Blog
MTV nyeredzi Rob Dyrdek nemukadzi Bryiana vanogamuchira mwana musikana!
Mhuri yeDyrdek yakangova ina-pack!
Nyeredzi yeMTV's 'Fantasy Factory' Rob Dyrdek nemukadzi wake Bryiana Noelle Dyrdek vangogamuchira mwana musikana anonzi Nala Ryan Dyrdek!
Mutumwa anobva kudenga. Iye akakwana zvakakwana. Ndiye mwanasikana wamambo. Iye ndiNala Ryan Dyrdek. Saka ndinotenda nekuda kwesimba remukadzi wangu anoshamisa uye nekutenda nemhuri yedu iri kukura.
Chinyorwa chakagovaniswa na Rob Dyrdek (@robdyrdek) pana Dec 29, 2017 pa4: 05 pm PST
'Ndiye mutumwa anobva kudenga,' aimbove nyanzvi skateboarder akatumira Chishanu pa Instagram yake, 'achiwedzera, Ndiye mwanasikana wamambo. Iye ndiNala Ryan Dyrdek. Saka ndinotenda nekuda kwesimba remukadzi wangu anoshamisa uye nekutenda nemhuri yedu iri kukura. '
Bryiana akatumirawo pasocial media kuti: 'Mwoyo wangu hauna kumbobvira wakazara kupfuura zvaari izvozvi. @robdyrdek ndinokutendai nekuva murume anoshamisa uye anotsigira uye baba vakanaka kwazvo pasirese! Kodah, mukadzi wako ane rombo rakanaka kuva newe semukoma wake uye ini ndiri kudaro, ndinodada newe! Nala Ryan Dyrdek, gamuchirai kumhuri yedu. Iwe unodikanwa kupfuura zviyero uye hapazombove nenguva muhupenyu hwako inoenda nekwausina kuyeuchidzwa nezve izvo '
Mwoyo wangu hauna kuzomboguta kupfuura zvaari izvozvi. @robdyrdek ndinokutendai nekuva murume anoshamisa uye anotsigira uye baba vakanaka kwazvo pasirese! Kodah, mukadzi wako ane rombo rakanaka kuva newe semukoma wake uye ini ndiri kudaro, ndinodada newe! Nala Ryan Dyrdek, gamuchirai kumhuri yedu. Iwe unodiwa kupfuura mwero uye hapazove nepo nguva muhupenyu hwako inoenda nekwausina kuyeuchidzwa nezve izvo
Chinyorwa chakagovaniswa na Bryiana Dyrdek (@bryianadyrdek) pana Dec 29, 2017 pa4: 36 pm PST
Mutsva mutsva wemufaro unobatana nehama hombe Kodah Dash, uyo akazvarwa munaGunyana wa2016. Vaviri ava vachanyatso chengeta baba vakabatikana nezvakawanda kupfuura kungoita pranks kwemakore anouya…
Chrissy Teigen tweets epic rant nezvaJohn Legend: Verenga
Jennifer Hudson akamhan'arira pamusoro pe Instagram pikicha
jesse james decker akashama photo
lisa marie presley mapatya vanasikana